Apple inogadzirisa rakakomba dambudziko rekuchengetedza mu macOS High Sierra ine yekuvandudza [Gadziridza nekukurumidza sezvazvinogona] | Ndinobva mac
Apple inogadzirisa dambudziko rakakomba rekuchengetedza muMacOS High Sierra ine yekuvandudza [Gadziridza nekukurumidza sezvazvinogona]
Uye ndezvekuti maawa mashoma apfuura takaona kuti Apple uye kunyanya macOS High Sierra vashandisi vakagamuchira kudzoka kukuru maererano nesystem chengetedzo. Neichi chipenga chakaonekwa neyekuvandudza, mamirioni evashandisi vangadai vakave nazvo zvinetso zvakakomba zvekuchengetedza Uye isu hatigone kubatsira asi kupa timu yeMacOS mbama hombe pachiuno.
Kukundikana kwacho kwaive kwakakosha nekuti kwakatibvumidza kuwana Mac yedu padanho re "midzi" nemasimba ese nenzira yakapusa, kunyangwe Mac yedu yaive ne password yekutangisa, uye nekudaro kuwana kune yedu yese data kwakasiiwa yakavhurika. Ivo havana kutora nguva refu mukuburitsa chigamba ne Yakazara inosungirwa kuchengetedzwa kugadzirisa kune avo vese vane macOS High Sierra yakaiswa paMac yavo.
Paunenge uchiverenga izvi iwe unofanirwa kushanyira Mac App Store mune iyo yekuvandudza tebhu uye tinya pane iyo yekuisa "Security Dudziro 2017-001" kuitira kuti dambudziko iri rakakomba rigadziriswe paMac yako .Muchiitiko ichi, isu "tinowira mukunyara" nekuda kwezvakaitika kuhurongwa hwekushanda uye tinotenda kuti Apple haikwanise kubhadhara zvikanganiso zvakakomba zvakadaro.
Izvi pasina mubvunzo ichava mhosva iyo Apple ichayeuchidzwa kwenguva refu uye ndezvekuti tinozviona zvinosuruvarisa kuti kukanganisa kwakapfava kwakadaro kugadzirisa kunogona kupfuura nemasefa ese ekudzora anoitwa mukambani usati waburitsa vhezheni itsva ku vanhuwo zvavo. Hatizive kuti kukanganisa uku kwave kwenguva yakareba sei muhurongwa, saka zviri pachena kuti mumaawa mashoma chete yapararira kuburikidza nemambure nekuda kweiyo tweet yakatangwa nemusimudziri Revhi Orhan, pane kusawirirana kwemaonero maererano neake kuburitswa kwedambudziko rakakomba rekuchengetedza. Iyi inyaya yakasarudzika uye hatisi kuzopinda munzira yekuenderera, yega se tenda Levi nekuona dambudziko, pamwe nekumhanyisa kwaApple mukuburitsa inogadziridza kuti igadzirise.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » macOS High Sierra » Apple inogadzirisa dambudziko rakakomba rekuchengetedza muMacOS High Sierra ine yekuvandudza [Gadziridza nekukurumidza sezvazvinogona]
Uye zvakadii nezvedu isu vasina kukwidziridzwa ku »HIGH SIERRA» uye isu tinoramba tichiita pasina chiitiko muSIERRA
Chaizvoizvo nekuda kwekukanganisa kusingaregererwe kweazvino matsva. Neichi chinyorwa chekukosha uye kusingaregererwe zvikanganiso, ini ndinosimbisazve pfungwa yangu kuti isavandudze kana isina kunyatso kudikanwa.
Iyi yekuchengetedza nyaya inongobata vashandisi veHigh Sierra
Apple kuyedza yayo yakazvimiririra yekutyaira system muArizona